Igwe ndị na-agụ mmanya vaịn na-aba uru? - Bgba Ígwè
Isi > Bgba Ígwè > Vintage igwe kwụ otu ebe - Ibọrọ nke mbipụta
Vintage igwe kwụ otu ebe - Ibọrọ nke mbipụta
Igwe ndị na-agụ mmanya vaịn na-aba uru?
“Echekwala na avinteji ịnyịnya ígwèbukwesịrịuba, n'ihi na naanị igwe kwụ otu ebe kachasị mma na-eweta ọnụ ahịa dị elu, 'ka Langley na-ekwu. “ỌtụtụDevid agụghị ndị gbaraA na-ere igwe kwụ otu ebe n'etiti $ 100 na $ 400. Ọbụna ihe mgbe ochie nwere ọmarịcha ihe mgbe ochie, dịka igwe kwụ otu ebe, anaghị agbanwe aka karịa ihe karịrị $ 3,000 na $ 4,000. ”
Anyị na-echekarị na ọ bụrụ na ị gwupụta akụ ndị e liri n'ala, ihe ochie ma ọ bụ ihe bara uru, ị ga-eji ihe bara uru baa ọgaranya. Ma o nwere ike iju gị anya ịmata na ihe ndị kasị oké ọnụ ahịa pụrụ ịbụ n’ime ihe ndị i zoro n’ụlọ gị. Site na egwuregwu vintage na furbys, na ọbụna efere ochie uzuzu uzuzu, ị gaghị ekwenye na uru ụfọdụ ihe ịchọ mma na-abaghị uru anyị hapụrụ mgbe ha chịkọtara ájá.
Ya mere, meghe onu ya n'uko elu, jide ájá ájá, ma ka anyị chọpụta ihe ndị bara uru nwere ike ime ka ị baa ọgaranya! (egwu egwu) - Amazing! - Nọmba 10, Nintendo Game Boy. Mgbe Nintendo Game Boy bidoro na 1989, ọ wetaara ụmụaka gburugburu ụwa ọ hoursụ ọtụtụ awa, akụrụngwa ndị a na-erekarị maka akụnụba. Ọ bụ ezie na ụdị nsụgharị nke njikwa aka na ọtụtụ ụdị ya na-efu n'etiti $ 30 na $ 150, uru ahụ na-arị elu nke ukwuu mgbe njikwa ahụ dị na igbe mbụ akara ya, Pricar ting.com na-eche na ihe egwuregwu Game Boy nke mbụ akara ga-abụkarị. ruru efu $ 549.95.
Ọbụna ụdị ọhụụ, dị ka nke a SpongeBob Game Boy Advance SP, nwere ike iweta ihe ruru $ 500 ma ọ bụrụ na ọ kaa akara. Udoghi nke mbu, nke mbu na nke mbu di na Amazon na eBay nwere ike nweta puku kwuru puku. Gbakwunye egwuregwu na-emegheghị na akụkụ ahụ nwere ike inyere gị aka kụrụ jackpot zuru oke.
Nwere ike iru $ 2,364 maka Amazing Tater, $ 2,500 maka Mega Man 5, na $ 3,500 maka njem Spud's Adventure, na ọnụ ahịa na-eru akara $ 1,000 ahụ. Ọ bụrụ na ndị mụrụ gị gwara gị na igwu egwuregwu na-egbu oge, chee echiche ka m na-agwa ha etu ha si hie ụzọ. Nọmba itoolu, bọọlụ bọọlụ.
Ọ bụ ezie na mmeri PGA njegharị bụ n'ezie ụzọ kachasị mma iji nweta gọọlfụ ego, ọ na-esiri ike. Ọ dabara nke ọma, egwuregwu ahụ ka nwere ike ime gị nnukwu ego na-enweghị ịgba chaa chaa. Ee, ị nwere ike ịme ọtụtụ puku dollar na-agbake bọọlụ golf.
Gọọlfụ ọkara gị na-efufu ihe dị ka bọọlụ abụọ n'otu egwuregwu, na bọọlụ gọọlfụ gfọdụrụ US nde 100 na-enweta kwa afọ. Nwere ike ịgafe n'akụkụ ebe egwuregwu golf siri ike ma chọta ọtụtụ bọọlụ na-efu efu na obere mbọ karịa ịgagharị. Ga-enwe mmetụta na-enweghị mgbagha nke bọọlụ ọla edo n'okpuru ala jiri ụkwụ gị; họrọ ma ị ga-agafe ebe siri ike gaa n’aka nri ma ọ bụ aka ekpe nke tee.
Saịtị dịka eBay auction ejiri bọọlụ gọọlfụ, ma ọ bụ ị nwere ike iresị ha ndị gọọlfụ na ọnụ ala dị ala. Ọtụtụ bọọlụ golf ewepụtara weghaara ihe dị ka cents 50 n'otu. Verchọta 1,000 bọọlụ nwere ike ime gị $ 500 maka ụbọchị azụmahịa.
Brandsdị adịchaghị na ọnọdụ dị mma nwere ike ree ihe karịrị $ 2 kwa nke ọ bụla. Mana ndị nwere gọọlfụ bọọlụ na-akpọsa onwe ha maara na nnukwu ego dị na ala ọdọ mmiri na ọdọ mmiri na golf golf, ebe kachasị elu nke bọọlụ furu efu. A maara ndị kachasị mma iji weghachite bọọlụ 10,000 kwa ụbọchị ma na-erite ihe dị ka $ 50,000 na $ 100,000 kwa afọ.
Usoro a doro anya na-abịa na oke ọrụ ma chọọ ikikere mmiri. Leziekwa anya maka agụ iyi na agụ iyi, dabere na ebe ị nọ, ha na-ata ahụhụ karịa ike gọlfụ gbawara agbawa. Agbanyeghị, ịnwere ike ịchekwaa nsogbu ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma ịsụ ngọngọ gaa na anụmanụ nwere mmụọ maka bọọlụ dimple; otu bọọlụ bọọlụ e si na eke n’Ọstrelia mgbe ọ loochara ha rere 1,253 na eBay US dollars e rere.
igwe kwụ otu ebe site na maine gaa florida
Ọ bụ eziokwu na ihe ha na-ekwu, ịba ọgaranya ị ga-enwe mgbọ. Number asatọ, anụ nkume. Ndị a nwere ike ịdị ka anụ ezi anụ ezi, mana ebe akụ ndị a bara uru, ha anaghị eri nri.
Nke a bụ n'ihi na ha bụ n'ezie okwute, akụkụ nke ihe a ma ama, ọkachasị ihe pụrụ iche na China na Japan. Alọ ihe ngosi nka dị na Lushan, China nwere akụkụ niile, ama ama ama maka mkpokọta okwute dịka anụ ezi ma ọ bụ anụ ehi. N’Ebe Ngosi Ihe Mgbe Ochie nke Kyushu dị na Fukuoka, Japan, nkume dị oké ọnụ ahịa nke anụ ahụ nke Taiwan dọtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọbịa 6,000 kwa ụbọchị na oge ọ nọ n’ebe ahụ.
Ekele maka nkume anụ dị ọtụtụ narị afọ, ndị dị na Kyushu Museum, bụ ndị a pịrị apị n'oge usoro Qing. Mana anụ nke okwu a bụ na ọnụahịa ugbu a arịgoro maka okwute ndị a, imirikiti nke sitere na jasper na agba nwere ọdịdị ma ọ bụ pịrị apị, a na-ere ọtụtụ okwute anụ maka ọtụtụ puku dollar. Yabụ, ọ bụrụ na ị nwere okwute mara mma n'ubi gị, buga ha ozugbo na China! Nwere ike ịba ọgaranya.
Ọ bụ ezie na China na Japan na-eme nzuzu banyere okwute ndị dịka anụ, ndị bi na Chile na Peru nwere mmasi karịa anụ nke yiri nkume. Pyura chilensis, nke a makwaara dị ka nkume dị ndụ ma ọ bụ squirt mmiri, bụ anụ na-adịghị mma, na-enye nri mmiri. Ọ bụ ihe oriri na-ewu ewu na South America na Eshia, mana enwere ike ihie ụzọ dị mfe nkume tupu agbajie.
Ọ ga-abụ oke ọnụ dị oke ọnụ ileghara njem njem gaa n'ụsọ osimiri, agbanyeghị, ebe ọ nwere ike ị nweta ihe ruru dollar 170 otu kilo. Number asaa, Pokémon kaadị. Lọ akwụkwọ sekọndrị nwere ike ịbụ oge siri ike maka onye na-anakọta kaadị Pokémon gị.
Mana dịka ọ na-adịkarị, ndị obi ọjọọ na-emeri ogologo egwuregwu ahụ, n'ihi na kaadị Pokémon na-aba ọgaranya n'oge a. Kemgbe ihe karịrị afọ 20 kemgbe etinyere aha Pocket Monsters aha, ndị na-achịkọta ahịa azụla obere kaadị dị ka ndị aghụghọ aghụghọ. Kaadị ahụ dị obere, nke bara uru ma na-egbukepụ egbukepụ, nke ka mma.
Versionsfọdụ nsụgharị nke kaadị holographic ndị a Charizard na-enweta ebe ọ bụla site na $ 12,000 ruo onye ruru $ 70,000, na kaadị ndị ọzọ ejedebeghị na-ewebata ihe nrite dị ka Pikachu Illustrator card, nke enyere ndị meriri CoroCoro Comic Illustration Contest na Jenụwarị 1998. It rere ya $ 55,000 buru ibu, ma edeputara ihe omuma ndi ozo na eBay rue ihe ruru 100. Ugbu a ị ghaghị ijide ha ka ha jide onye ọ bụla! Nọmba isii, Furbys.
Ma ihe egwuregwu ndị a mara mma ma ọ bụ na-atụ ụjọ bụ arụmụka ka edozie, mana enweghi arụmụka banyere uru ha bara n'etiti ndị nchịkọta na 2019. Ọ bụrụ na ịnwee Furby na-enweghị ntụpọ, ma ọ bụ nke ka mma, gị et, ụlọ ọrụ mechiri emechi, ọ nwere ike iweta ị nnọọ a obere akpa ego; mbụ, kaa akara 1998 mbipụta mgbe niile na-efu ihe karịrị $ 1,000 na eBay. Nta nsụgharị na-ewetakarị karịa.
A Millennium Edition Furby rere ihe karịrị $ 4,500 na mbido 2019! Mana ọbụlagodi ụdị igbe ghere oghe nwere ike iweta $ 100. Yabụ ọ bụrụ na ị nwere Furby dina, ugbu a bụ oge iji cheta oge ị bụ nwata ma ọ bụ kwụọ ya na nkwụnye ego gị. Number ise, oyi ifuru.
N'ụzọ doro anya, ọ bụrụ na ị chetụla na a ga-akwụ ụgwọ Roses ọnụ karịa, ị nụbeghị banyere nnukwu snowdrop. Elizabeth Harrison's Galanthus Woronowii, ma ọ bụ Giant Snowdrop, bụ ifuru mmiri dị na UK ma too ya maka akara ngosi ọla edo ya na ụkọ ya na £ 65 kwa otu bọlbụ, na n'otu ikpe na 2012, otu bọlbụ rere maka £ 725. Galanthus Woronowii na-eme ihe ngosi oge ụfọdụ n'ubi dị n'ofe UK, yana ndị nchịkọta na-adị njikere ịkwụ ụgwọ kachasị elu, nke a bụ nnukwu ihe ngọpụ ka m wee pụọ n'èzí, ndị na-elekọta Du Tube m agaghị ekwe m pụọ n'èzí ọzọ n'ihi ya ị kwesịrị ịma ka m hapụ ọ na-aga.
Nọmba nke anọ, Lego. Ha nwere ike imerụ ahụ karịa mgbe a mụrụ ha ka ha zọpụ ụkwụ, mana ị maara ụfọdụ brik Lego nwere ọnụego dị elu karịa? Na-eweta dị ka Gold? Lego na-eweta usoro ọhụrụ n’ahịa kwa afọ ma na-lara ezumike nká ndị okenye kwa afọ abụọ. Nke a emeela ka ahịa ahịa nke abụọ dị mkpa na ọnụ ahịa nke mkpoko Millennium Falcon a tụfuru atụfu na-ebili nke ukwuu, a na-eresị ụfọdụ n'ime ha ihe ruru nnabata 15 na ọnụ ahịa.
Nnukwu mkpokọta Lego na-akụ $ 10,000 mgbe niile na eBay, yabụ bọket gị nke brik na ọnụ ọgụgụ nwere ike ịba ezigbo penny kwa. Mana ndị nchịkọta na-abụkarị ịchụ nta maka ụfọdụ akụkụ na-efu ma dị njikere ịkwụ ụgwọ dị oke ọnụ iji mezue usoro ha. Dịka ọmụmaatụ, naanị ụkwụ Boba Fett na-ere ihe karịrị $ 200, ebe okpu a na-acha uhie uhie Darth Vader na-ere ihe karịrị $ 400 t maka ọtụtụ puku, yabụ na Legos gị na-ezighi ezi nwere ike ịme gị ọgaranya.
Kpachara anya ịlele ala ụkwụ gị! Number, atọ, mbipụta nke mbụ. Emechaa ichu nta Bomụaka Game, Furbys na Legos, gbaa mbọ hụ na ị ga - achọpụta akwụkwọ akwụ ụgwọ gị. Sfọdụ mbipụta izizi bara uru dị mma na ọnọdụ dị mma.
Dịka ọmụmaatụ, mbipụta mbụ nke 'Harry Potter na Nkume Ọkà Ihe Ọmụma' na-adịkarị n'etiti 40,000 na 40,000 Worth $ 55,000. Ọ bụ naanị otu ụdị nke Joanne Rowling kwuru dị ka onye dere akwụkwọ nwebisiinka nke akwụkwọ ahụ tupu ọ malite iji aha ya bụ JK - naanị mbipụta 500 ka ebipụtara na mbipụta nke mbụ, ma rere otu akwụkwọ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100 nnukwu na 2019! N'otu aka ahụ, ọ bụ naanị otu puku na narị abụọ ka JRR mere.
E bipụtara Tolkien 'The Hobbit' na 1937 ma ree ya ngwa ngwa. Mbipụta nke mbụ ruru ihe dị ka $ 65,000 taa, otu nke Tolkien bịanyere aka na ya maka otu n'ime ụmụ akwụkwọ mbụ ya butere ihe ruru $ 210,000 na ọnụ ahịa na 2015. Mbipụta izizi nke 'The Great Gatsby' nke F.
A na-eji Scott Fitzgerald akpọrọ ihe karịrị $ 150,000. Enwere ike ịmata mbipụta izizi nke akwụkwọ 1925 a site na typo na azụ jaket uzuzu nke sụgharịrị Jay Gatsby na obere J Get penny mara mma. Mana olee otu ị ga - esi mara ihe bụ mbipụta izizi na ihe na - abụghị? Buru ụzọ lelee akara nọmba na peeji nke mbụ, ọnụ ọgụgụ kasị ala nọchiri anya ibipụta akwụkwọ a.
Ọ bụrụ na enwere 1 na usoro ọ na - egosipụtakarị na ị nwere mbipụta izizi. Ọtụtụ mgbe, ndị mbipụta akwụkwọ ga-ebipụta 'Agba nke Mbụ' ma ọ bụ 'Mbipụta nke Mbụ' na ibe nwebisiinka, ọ bụ ezie na nke a anaghị edo anya mgbe ụfọdụ. Ọ bara uru ịhụ onye ọkachamara ma ọ bụrụ na ejighi n'aka, tupu ịkata obi ike kwupụta onwe gị onye nwe ụlọ dị mpako nke Gatsby numero uno.
Nọmba abụọ, nri Pyrex. Pyrex na-eme nri dị iche iche, ọkwa, na iko ndị ọzọ dị oke mma. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla, ọ dị ka ọ nwere ite Pyrex ma ọ bụ abụọ, mana ọ bara uru karịa uru ha bara.
Vintage Pyrex nri abalị na-ere ihe ruru $ 1,800 na ntanetị, na ụdị ngosipụta nke onye ọ bụla enweela ihe ruru $ 10,000 Edepụtara! Ndị nchịkọta na-akpọ onwe ha ndị junkies Pyrex na-achọ efere emere n’agbata 1910s na 1970s. Ihe kachasị baa uru na nri ndị a na-achaghị acha nwere ụkpụrụ ifuru ma ọ bụ geometric. Versionsdị nsụgharị ndị ọzọ na-ahụkarị abụghị ihe bara uru, mana ha ka na-akwụ ụgwọ dị ka ọnụ ọgụgụ zuru ezu.
N'agbanyeghị nke ahụ, na ahịa a na-ere, a ga-ere ndị a ihe na-enweghị isi maka mgbanwe ndị a na-amaghị nke ọma. N'ihi ya, ọ bara ezigbo uru ịmara! Ya mere, gaa na nne na nna gị ochie na ndị ikwu gị taa, mana gbalịa ịdị aghụghọ ka ị na-agagharị na kichin ha. Tupu m ekpughe ihe kachasị baa uru ị nwere ike ịnwe, nke a bụ Aha Kwesịrị Aha nke nwere ike ịme gị ego.
Ọ bụrụ n’ịchọtaghị nke ọ bụla n’ime ihe ndị ahụ m kwuru n’ụlọ gị, ikekwe ị nwere egwuregwu bọọdụ ochie. Na 2017, otu nwanyị na-eme ngagharị aha ya bụ Laura Niebauer Palmer nwere echiche magburu onwe ya nke ịtụgharị egwuregwu bọọlụ ochie na azụmaahịa ya n'akụkụ, ọ na-enwekwa ọganiihu na ya. Ọ na - amalite site nyocha nyocha maka akụkụ egwuregwu edochi anya wee zụta egwuregwu ndị ahụ site na ụlọ ahịa na - ere ahịa, na - adịkarịghị karịa dollar ole na ole.
Mgbe ahụ, ọ na-ere akụkụ ahụ na eBay na ọnụahịa ndị mmadụ zụtara ha n'oge gara aga. O nwetara $ 250 n'ime ọnwa isii site na usoro a dị mfe, nke izu ike. Yabụ na ọ bụghị akụnụba, mana maka obere pawns plasti ọ bụ mmeri dị egwu! Ọ maara nke ọma otu esi egwu egwuregwu ahụ, m ga-ekweta na ọ bụ nna ukwu na Monopoly.
Number otu, Super Mario Bros. Ebe ọ bụ na e wepụtara egwuregwu mbụ na 1985, Super Mario Bros aghọwo aha ezinụlọ taa nwere otu ọ dịkarịa ala otu egwuregwu Mario, mana ndị nwe egwuregwu mbụ maka Nintendo Entertainment System nwere ike ịbụ na zuru bonanza ịnọ. Mpempe akwụkwọ eji eme ihe, yana nkwakọ ngwaahịa mbụ ya, nwere ike iweta ihe si na $ 40 ruo $ 600, mana akara a kara akara bụ ihe dị iche iche $ 13,000 na oge ụfọdụ $ 25,000 dabere na ọnọdụ ya.
Mana na mbido 2019, otu akwụkwọ e rere maka $ 100,150 dị egwu na auction, na-eme ya egwuregwu kachasị ọnụ ahịa n'oge niile. Ọ bụ naanị akwụkwọ nke dịbu adị ka ejiri mkpịsị akara mechie, ebe ọ bụ na e mechiri akwụkwọ ndị ọzọ niile. Ọnụahịa ahụ bara uru n'ezie.
Ọ bụrụ na nke ahụ emeghị ka ịchọrọ igwu ala NES ochie, amaghị m ihe ga - eme ya! Yabụ, mgbe ịlechara isiokwu a, ị ghọtara na ị nwere akụ dị oke ọnụ n'ụlọ - kedụ nke akụ ụwa ndị a nke kacha ju gị anya kacha baa uru na nzuzo? Mee ka m mara n’ihe a n’okpuru. Daalụ maka ikiri! (egwu dị egwu)
Kedu ihe a na-ewere dị ka igwe ochie?
Ọ bụrụ na gị bike e mere mgbe Post-World War II ọgba tum tum, dịkarịa ala afọ 25ochiena e engineered na elu àgwà ewu, ọ bụtụlereịbụ akpochapụwo. Ọ bụrụ na gị ọgba tum tum na-kpamkpam ahaziri naochie, mgbe ahụ ọ bụ aDevid agụghị ndị gbara. Ọ bụrụ na ọ karịa 35 afọochie, ọ bụ maa iheihe mgbe ochie.
Passo Croce d'Aune. Na ogologo nke 8.5 kilomita na grajentị nkezi nke 7.8%, ọmarịcha ọrịrị, mana ọ nweghị ihe pụrụ iche.
Ihe m na-ekwu bụ na ọ bụghị mgbe niile ka ọ bara uru na Giro, dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ebe dị oke mkpa, ọ bụghị n'ọsọ, kama maka ịgba ịnyịnya n'ozuzu ya. (egwu egwu) Anyị na-eru elu ugbu a ma ọ nweghị ike ịbịa ngwa ngwa. Oh Chukwu.
Lelee m cadence! Ọ bụrụ na ọ bụghị maka Croce d'Aune, mgbe ahụ agaghị m achụpụ nke a, mana nke a. Ọ bụ naanị ihe ihere na oge a dị mkpa na ịgba ígwè agaghị eme na ịrịgo nke anwụ na-acha na afọ niile. (Egwu oge ochie) (egwu egwu na-arị elu) Ka anyị laghachi azụ ntakịrị.
Kedu otu esi arịgo n'ịgbagharị ịgba ígwè niile? Ọfọn, Campagnolo, Tullio Campagnolo ọnọdụ na Nọvemba 1927. N'oge ahụ, ịgbanwee pụtara ịgbanwee ụkwụ na n'etiti otu n'ime mgbatị abụọ agbanweela. Otú ọ dị, snow nwere aka ya oyi ma ọ nweghị ike iwepu ịnyịnya ígwè ya.
Na-eti mkpu 'Bisogna cambià qualcossa de drio' na ikuku, ọ gara ya. Ọ pụtara na ihe ga-agbanwe n'azụ. Ọ mepụtara ngwa ngwa ntọhapụ na site n'ebe ahụ otu oge a.
Olee ụdị nsogbu ọ nyeere anyị aka ka anyị gbanahụ? Agam achoputa ka o siri sie ike irighari tupu emeputa ihe ndi ozo. Na-achọ m ihu ọma. (Soft jazz music) may nwere ike ịchọpụta na anaghị m agba ịnyịnya igwe ezigbo 1920, mana Jon Cannings rụrụ ọrụ dị mma na-eweghachi otu ọfụma na ebumnuche bụ ka Sy bịa ebe a ma gbaa ịnyịnya a, mana ihe abụọ gbochiri nke a ime.
Nke mbu, Sy agbawaala otutu ihe di egwu na ihe ndi ozo kemgbe GCN - Enweghi nsogbu. Mba, echere m na anyị nwere ezigbo nsogbu - ma ewere ya na enweghị oge ịkwụsị. Nke ọzọ Ihe kpatara ya bụ na Sy na-eme ka mmiri zoo, mana atụla egwu n'ihi na igwe kwụ otu ebe a nwere njirimara niile nke oge ahụ.
Ya mere, anyị nwere junk, dị arọ mgbanwe The ígwè etiti, nne Mmetụta. Iju aka, akọrọ. Ezigbo, na-eme mkpọtụ shitty, akọrọ.
Mkpịsị ụkwụ mkpirisi, enweghị isi! Na (iwe) na m nwere gia ma abụọ n'ime ha ma ha abụọ buru ibu, nke pụtara na m na-adọta ihe ndị ahụ jọgburu onwe ha. Akụkụ mbido nke ịrịgo a dị ihe karịrị 10% nke a na-ahụta dị ka nkpoda site n'ụkpụrụ nke oge a na ntụgharị nke oge a, mana ọ bụ ihe ọzọ. Enwere m ụdị mmụta na ị ga-eme ya n'ụzọ dị iche.
Ihe niile gbasara ike na ịnwa ịgbanwee ngwa ngwa, mana ọ dị nwayọ nwayọ ma ọ na-egbu mgbu karị. Ekwesịrị m inwe olile anya na ọchịchọ ahụ ga-akwụsịtụ ntakịrị ka m wee nwee ike ịga n'ihu ma mezie ya. (grunting) Oh, m ga-anwụ. (ọchịchịrị italian gbara ọchịchịrị) N'oge gara aga, ha agaraghị enwe ike ịrị ugwu dị ka Angliru ma ọ bụ Mortirolo, ọ bụghị n'ihi na ha pere mpe egwuregwu, n'ụzọ dị iche, naanị n'ihi na ntụgharị asụsụ a agaraghị ekwe omume.
Gaara aga. (egwu dị jụụ) Oge akụkọ Campagnolo dị na Gran Premio della Vittoria, ọ bụghị Giro d'Italia. Mana okwesiri ikwu banyere Giro d'Italia nke 1927 iji nye ihe omuma a ihe omuma.
Giro nke afọ a bụ onye Alfredo Binda meriri, onye nwere ọnụ ọgụgụ dị egwu, ọrụ 41 nke Giro d'Italia na ngụkọta nke mmeri 11 Grand Tour. Mana ihe pụtakwara ọzọ bụ ụdị agbụrụ ahụ n'oge ahụ. Giro 1927 dị kilomita 3,758 ma nke ahụ gbasasịa karịa 15.
Mgbe Froome meriri na 2018, ọ dị kilomita 250 dị mkpụmkpụ ma gbasaa usoro 21. Ugbu a ọ na-eju anya ịchọpụta na ọsọ ọsọ Binda bụ 16 kilomita kwa elekere, nke pụtara na oge ọ bụla ya na oge ọ bụla bụ awa 9.6, ma ọ bụrụ na i jiri ya tụnyere Froome na 2018, nke ọma, ọsọ ọsọ ya bụ 40 kilomita kwa awa, nke pụtara na ọkwa nke ọ bụla were obere elekere anọ.
Iji merie Giro, Binda na-ebugharị awa 55 karịa Chris Froome Grand Tours Bac k ụbọchị ọ nwere ike bụrụ ihe jikọrọ ya na mmemme ntachi obi anyị nwere ugbu a, dịka Transcontinental. (grunting) Ihe ịtụnanya rụzuru, ịtụnanya. N'elu ugwu ahụ, enwere ihe ncheta nke Tullio Campagnolo.M ga-asọpụrụ m mgbe m ruru ebe ahụ, ọ bụrụ na ikpere m anaghị agbawa. (brisk Italian music) Ọ dị mma, aga m agbanwe gia ugbu a iji gosi gị ihe ha kwesịrị ime n'oge ahụ, anyị nwere mkpụrụ osisi ndị a.
Anyị nwere gia n'akụkụ a na ubé dị mfe gia n'akụkụ a. Ọ bụ kpam kpam-enweghị isi. Nke ahụ dị ka ihe, 16 na nke a dị ka 17.
Ezigbo nso. Oh, ọ rapaara. See hụrụ, nke a siere m ike iwepụ ugbu a, nke ahụ bụ nsogbu ahụ Tullio Campagnolo nwere.
Aka ya dị oyi, aka m jụrụ oyi, anyị nọkwa otu ugwu ahụ. Ihe n’abụ uri n’ebe ahụ. Ugbu a, m nwere slide ya nke dropouts.
Ka anyị weghachite agbụ ahụ ma ọ bụrụ na m nwere ike. Ugbu a, m na-anwa itinye nku ahụ na azụ. Abụọ abụọ, Chukwu ihe a esiri ike.
Enwere m ike ịgwa gị ugbu a etinyegoro m ngwongwo nnapụta m, ọ na-adị ka mmụọ anwansi na-arị elu ịrịgo a, maka Chukwu. (egwu egwu) ncheta Tullio siri ike n’ebe ahụ. Echeghị m na ndị na brek na-aga downhill ma.
Enwere m ike ịlaghachi n'ịnyịnya ígwè m ugbu a, biko? (Exhaling) Daalụ maka nke ahụ. Eji m n'aka na ọ ga-abụ nkwenye na-eweta SRAM igwe kwụ otu ebe na ncheta na Campagnolo, mana ejiri m n'aka na Tullio ga-akwado ụfọdụ nkwalite eTap, ọ bụ ezie na ọ bụ ntakịrị ihe ijuanya na igwe kwụ otu ebe m enweghị ọpụpụ ngwa ngwa. Ọ nwere thru axle.
Ndo. (egwu dị nro, nke dara ụda) Ugbu a, mgbe anyị chetara akụkọ anyị gbasara oge ọkụ Campagnolo. Eziokwu ahụ bụ na okwu ya na-agbada n'akụkọ ihe mere eme kwesịrị ime ka ị nwee obi abụọ ozugbo banyere ole ọ bụ n'ezie eziokwu na otu nnwere onwe uri.
Obi abụọ a nwere ike ịbụ ihe ziri ezi site n'aka ọmarịcha akụkọ ihe mere eme banyere ịnyịnya ígwè Dav. mee nchọpụta Herlihy enweghi snowy Gran Premio della Vittoria na 1927, na edeghị Campagnolo dị ka ọkacha mmasị na nke ọ bụla n'ime ụdị agba ọsọ ahụ na nke ọ bụla nke agbụrụ ahụ na 1930s. Campagnolo nwere ha, mana ha bụ maka obere tweaks na imepụta mbụ na otu ihe ga-aga azụ derailleurs emesia.
Mana anyị achọghị ịgọnahụ Campagolo ọnọdụ ya na akụkọ ntolite. Ọ bụ onye ọhụụ, onye ọhụụ ọhụụ, onye were echiche dị adị wee melite ha. Ọ bụkwa ọrụ maka echiche nke otu a, ihe anyị na-enweghị ike iche n'echiche taa ma ọ bụrụ na ọ biko biko nye ya mkpịsị aka ukwu ma denye aha GCN.
Na ịhụ akwụkwọ ọzọ nke anyị na-eme The Epic Passo di Nivolet, ịrị elu site na ọrụ Italiantali, wee pịa ebe a. (egwu amachi)
Ihe ejiji igwe eji agbapu bu ahihia?
Ihevinteji igwe kwụ otu ebebụkwarupho karunkasi obina ime ihe bara uru karịa ọsọ. Enwere oghere maka racks ma ọ bụ okpokolo agba? Ndi nwanyi obulavinteji igwe kwụ otu ebenwere aluminum n'ihu ụgbọelu ogbe. Ya mere, na-eme ka ọ dị mfe itinye nkata maka ibuga ngwongwo gị na site na ọrụ ma ọ bụ na-agbagharị na gburugburu obodo.
Ebe ka ọ ga-aga? Damn ya, Matt, gini ka ị bịara? - Ndewo, Si. Ọ bụ naanị ntakịrị nsọpụrụ maka oge gara aga, ezigbo di. Actually maara n’ezie ihe ị hụrụ? - Ọ dị mma na m nwere ezigbo echiche maka ihe m na-ahụ, mana enwere ike ị mara m. - Nke a bụ otu ọgba tum tum Stephen Roche gbara na Giro, Tour de France na World Championship na Treble, Si na 1987, na nke a bụ otu n'ime ezigbo ọgba tum tum ndị Stephen gbara.- Nke a dị ezigbo mma.- Ọ bụ akụkụ nke akụkọ ịgba ịnyịnya ígwè na gị, nwa m, na-achọ iburu n'apata.
Nwere ike ịnọdụ ala na igwe igwe m ma ọ bụrụ na ịchọrọ - nke ahụ dị mma, ọ bụghị ya? FIR rim - Ọbụna nke mbụ Vittoria taya site na 1987 na ya.
Ha anaghị ejide ikuku, mana ha na-agagharị nke ọma. Ma n'ezie ihe zuru ezu. Enwere m akpụkpọ ụkwụ Sidi mbụ ejiri akpụkpọ anụ zuru oke site na 1986 - Nice.- Danish Cinelli okpu agha sitere na 1988 yana n'ezie uwe Carrera na 1987, nke doro anya na Stephen meriri njem ahụ.
O were m naanị 15 nkeji iji tinye ụkwụ m na mkpịsị ụkwụ mkpịsị aka iji mee ihe n'eziokwu. Ma m ga-agwa gị ihe, olee maka anyị ga-aga maka ịtụ egwu ka anyị mee ya ka m wee nwee ike zuru oke
Ihe m ga - eme, a ga m etinyekwu oku n’ọkụ na - achicha ma mee achịcha ochie a. Lee anya na peeji a - ị hụrụ, o siri ezigbo ike, ọ bụghị ya? Ebee ka oghere dị? Enweghị m ike ịhụ oghere gị, Mat. ♪ 'So Matt, ọ bụghị nnukwu? - Ọ dị mma. - Oh, ọ dị mma. - Matt, enwere ọtụtụ ihe dị iche banyere igwe kwụ otu ebe a, ma ọ bụ nke aghụghọ ma ọ bụ nke isi, amaghị m ebe m ga-ebido Kedu ihe bụ echiche mbụ gị? - Echere m na ọ bụ ozugbo bulie igwe kwụ otu ebe.
Ọ dị oke egwu, ma ọ bụrụ na i jiri ya tụnyere Ridley ị na-agba ịnyịnya, dịka ọmụmaatụ, echere m na anyị dịkarịa ala abụọ, abụọ na ọkara, ikekwe kilogram atọ dị arọ karịa igwe ịgba ọsọ ọsọ ọsọ nkịtị, taa. Mana ihe mbụ ị na-ahụ anya bụ etu oke ọkpọkọ siri dị. Igwe kwụ otu ebe a bụ ọkpọkọ Columbus XLS.
Ọ mara mma. E nwere ọtụtụ ọrụ aka na tunnels. Battaglin zọọ ebe niile.
Ọ dị ezigbo mma, mana ọ dị ka ọ na-emebi emebi. Ma a bịa n'ịgba ịnyịnya, ọ bụghị n'ihi na m na-agba ịnyịnya
Anaghị m agba ịnyịnya ígwè a, mana m na-agbagharị na windo ígwè mgbe m malitere ma chefuo na ha siri ike. Echere m na ọ bụrụ na ị na-ele igwe kwụ otu ebe dị ka nke a ma e jiri ya tụnyere igwe kwụ otu ebe taa, ha na-adị nnọọ uke
Mana ọ bụrụ na ị manye ike ahụ, ọnwụ efughi oke ma ọlị, ọ bụghị ihe ọjọọ. Otu ihe na-adọrọ mmasị tupu m abanye na pedals, ugbu a, agbaala m. Echere m na m na 42/19.
Ọ bụ 7-ọsọ ka nke ahụ bụ ihe niile m nwere - have nwere ndị na-agbanye ọkpọkọ na ya - Yup - Nnukwu mgbanwe na-agbanwe, na-ewepụ ihe mepụtara nke derailleur, bụ mgbe Shimano kpaliri ndị na-agbanwe agbanwe ahụ. kedu ka ị ga-esi laghachi azụ tube? - Ọ dị egwu.
Ama m, maka otu ihe, achọrọ m ịkpọ ndị a ha na-ebi onwe ha ugwu.
Site na nke a ka m na-ekwu, ị ga-egbutu ha n'onwe gị. E depụtaghị aha ndị a. Ọbụna na oke ọnụọgụ, ịgbanye nnukwu mgbanaka ahụ esighi ike.
Echere m na igwe kwụ otu ebe a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri atọ na nke gara ozugbo. Ọ dị ezigbo mma. Ihe ọzọ jidere anya m, ihe mkpofu sadulu-to-handlebar, nke ọma, enweghị ọtụtụ.
M na-eche mara mma magburu onwe ya n'ihu. Ọ bụrụ n'ileghachi anya n'ọnọdụ Stephen Roche nwere na njem ahụ, ọ dị oke oke dịka ndị ọkwọ ụgbọala ahụ taa, ọ na-adị gị ka ị nwere ike ịgagharị obi ụtọ ụbọchị niile na-enweghị nkwekọrịta. Ọfọn, nkasi obi ọ bụla, n'ezie.
Nke a bụ ihe. Mgbe ị na-agazi ngwa ngwa, nọdụ ala, họrọ ọzọ, ma ị ga-aga. Ekwenyesiri m ike na ọ naghị eleba anya na m na-agba akụkụ nke ọgbara ọhụrụ na ihu na igwe kwụ otu ebe a.
O di nwute na taya ndi a di iri ato ma otu ghaa tupu anyi arapu. Ma anyị nwere, echere m, Simon, ihe dị ka nde abụọ fọdụrụ. Ka m gwa gị, Matt, ọ masịrị m nke ukwuu ugbu a, lee ihe a ka ọ da.
Del nwere breeki ụta na - amaghị nke ọma ọkachasị nke ọma - ha nwere nkwalite ụda olu, nke adịchaghị mma - mba - ka anyị were nke buru ibu, ka anyị gawa.
Na brek bụ n'ezie isi n'ala n'ihi na m onwe m, m na-agba ọsọ Vittoria CXs ndị fọrọ nke nta 30 afọ otú ahụ ka m ga-a bit ịkpachara anya. Mana ọ na-adị mma. Ọmarịcha ụzọ dị oke egwu ma ọ na - amịkọrọ ụzọ na - enweghị isi ma nwee ezigbo ntụsara ahụ.
Ka anyi jee, ochie na nke ugbua. Cheers, Si! - Ụchụ gbakwa. Otu n'ime ihe ndị ọzọ dị egwu gbasara ntụgharị asụsụ bụ ntụgharị asụsụ ọbụlagodi na ndị ọkachamara na - akwọ ụgbọala.
Nọ na gịnị, 42/20? - Ee, ọ dị mma, nnukwu mgbanaka bụ 52, obere mgbanaka ahụ bụ 42. - Ọfọn, anyị na-eme obere ule.- Ọ dị mma.- Maka na m na-eche ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịkwanye ókè ịchọta igwe kwụ otu ebe a. - Cheta kwa , Si, Enwekwara m akpụkpọ ụkwụ nwere akpụkpọ anụ zuru ezu.
Yabụ m tufuru ma ọ dịkarịa ala 80 watts kwa mgbanwe - na ịrị elu dị ka nke dị elu dị ka nke a, ebe ibu dịkwa mkpa, nri? - Eeh, enweela m ọkara na ọkara, kilo atọ karịa gị. Oh, mpe mpe. Ugwu ahụ dị larịị, Si.- N'ezie, ọ na-akawanye njọ ntakịrị n'akụkụ nkuku.- Ehee! Olee otu nkpokoro nke ahụ bụ, ihe dị ka otu onye n'ime anọ? - Ee, nke ahụ ziri ezi.
M na-eche ihe ọ bụla otu ụzọ n'ụzọ atọ gburugburu. Enweghị m mmechuihu ugbu a, Si.Right.
Anyị a ga-anwale ntakịrị? - The ọzọ ihe, a igwe kwụ otu ebe mara mma nke ukwuu akara a mgbanwe nke oge, bụ pedals, ọ bụghị ya? Still ka na-eyi obere vidiyo na eriri nke, dịka ị maara, Stephen Roche meriri njem Euro ya, Worlds, Triple Crown. - N'ihe banyere arụmọrụ n'ezie, echere m na ha bụ otu ihe ahụ, ọ bụ naanị ihe dị mma na ihe dị mma. Ozugbo ijidesi ụkwụ gị ike, ị tufughi ihe ọ bụla, ma buru n'uche na na mbubreyo 1980s, SeanKelly meriri ọtụtụ akwụkwọ akụkọ megide ndị na-agba ịnyịnya na-enweghị obere vidiyo.
Ọ bụ naanị otu n’ime ihe ndị ahụ. Ha anaghị emerụ ike. - Ọfọn, nke a bụ ajụjụ na-ere ọkụ, Mat.
Nyere ọganihu dị ukwuu nke teknụzụ dị n'etiti igwe ọgba tum tum 1987 na 2014, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ma dịkwa mfe ịnya igwe ma ọ bụ nke ochie? - Ị ma nke mere? Anọla m na-anya ụgbọ ala nke a kilomita ole na ole ugbu a, ọ na-eche nke ọma. Site na tweaks ole na ole, enwere m ike ibuli ihe mkpuchi ahụ ntakịrị, ọ bụ ihe ọ pleasureụ ịkwọ ụgbọala. Ọ bụ akụkụ nke ihe nketa na-agba ịnyịnya ígwè ma ị maara ihe, m na-eche echiche maka ịzụrụ igwe kwụghachi azụ iji gaa na cafe na-agba ọsọ ma nwee obi ụtọ ihe ịgba ịnyịnya bụ ihe niile.
Echere m na banyere arụmọrụ kacha elu ma ọ bụ usoro siri ike, ọzụzụ siri ike, aga m aga otu n'ime ndị ahụ. Ma ụbọchị dị jụụ na anyanwụ, m ga-ahọrọ otu n'ime ha ka ị nwee ike ịnụ ụtọ egwuregwu ahụ. Ka anyị tụgharịa nke a ntakịrị wee hụ ihe ịma mma a nwere ike ime.
Kedu ihe anyị nwere na odometer? - Iri abụọ - Ise - Iri abụọ - asaa, 28, 29, 30 mph. Lee! Are laghachila, Si? Maka ihe ndị ọzọ GCN Friday pịa pịa ebe a, maka m retro tech pịa ebe a ma bụrụ onye na-akwado GCN, pịa okpu agha m.
Afọ ole ka ịnyịnya ígwè ga-abụ tupu ụbọchị vaịn?
Igwe igwe igwe na-aga ngwa ngwa. Kwa afọ ngwaahịa ọhụrụ na-abịa n'ahịa ndị na-adị mfe, sie ike na ikuku. Ihe niile kwesiri ka anyi mee ngwa ngwa.
Ma olee ókè ọdịiche ọ na-akpata n’ezie? Kedu ọsọ ọsọ anyịnya igwe nke oge a? Achọrọ m ịchọpụta.- Mụ onwe m.- Ọmarịcha igwe.- Oh, daalụ nke ukwuu.
You nwere mmasị n'ịgba ọsọ? - Ee, dịkwa mma. N'elu na azu? - Na na - Na ada ụda - dịkwa mma. Ọ bụ gị n'aka, ochie m. ♪ ♪ - Nke a bike bụ ezigbo mpempe akụkọ ihe mere eme.
wegmans ike snacks
Ọ bụ Orbea na-agba ịnyịnya na mmeri na 1985 Vuelta a Espana nke Pedro Delgado. Nke a bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe ya, ọ bụkwa ịma mma. Nchara ígwè, ọkpọkọ Vitus 788, naanị gia 12, nke Simplex, Weinmann rims nyere, Weinmann brek, Michelin taya, n'ezie sara mbara nke ukwuu na 25 Celsius C.
Naanị ihe na-efu bụ mkpịsị ụkwụ mkpịsị ụkwụ na eriri. Kedu ihe m ga-asọmpi megide? Gịnị bụ igwe kwụ otu ebe ugbu a? - Echere m na ị nwere ike ịsị na nke a bụ nnukwu nwa nwa nke Pedro Delgados Vuelta, Espana na-emeri ọgba tum tum. Ọ bụ Orbea Orca M-LTD, n’ime afọ iri atọ na otu gara aga, ọ nọ n’ụdị nri ụfọdụ, kilogram ya efunahụkwa.
Ugbu a ọ dịghị onye ọ bụla nọ na-agbanye ọkụ. Kama itoolu igwe, anyị nwere 130 carbon-cut cut carbon carbon nke etinyere, glued wee gbaa ọkụ ọnụ. Anyị nwekwara wiil carbon, oche oche, aka na azuokokoosisi, oge a 22 gears, Shimano's Di2, yabụ elektrọnik na-achịkwa, obi dị m ụtọ na m nwekwara pedalssssssssals ebe a.
Ya mere, gịnị bụ ịgba ọsọ anyị? Ọfọn, elu ugwu ahụ dị mita 280 n'ịdị elu. Anyị nwere kilomita anọ nke ụzọ ndị mara mma, na-agba agba n'etiti ebe a na ebe ahụ, aga m agbago ma laghachi azụ. Naanị tụọ ihe dị iche.
Enweghị ike mita, enweghị ọnụọgụ obi, anyị na-aga ochie, naanị site na mmetụta. Kedu ọsọ ọsọ igwe kwụ otu ebe a? - Gbaa nọmba otu. Ka anyị lee ma m ga - eme ikpe ziri ezi na ọgba tum tum m na - emeri.
Ugbu a anyị nọ na 2016, nchekwa na-ebu ụzọ, n'ezie. Amachaghị m ihe Mr. Delgado ga-eche maka nhọrọ akpụkpọ ụkwụ m na enweghị mkpịsị ụkwụ mkpịsị ụkwụ, mana ka anyị gbalịa.
N'ihe na-agbanwe ụgbọ mmiri, aghaghị m iji ya mee ihe maka ugo anya n'etiti gị ga-achọpụta na anaghịzi m eji ụkwụ azụ Pedro Delgado. Anyị nwere ike inwe nsogbu, Mike. Mba, echere m na anyị nwere ezigbo nsogbu.
Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi na enwere m ike karịa ya, echeghị m, mana ọ dị nwute na agbajiri m freewheel ya ka m wee nwee igwe zuru ezu zuru ezu ma e wezụga maka ụkwụ azụ. Gwa gị ihe eriri 6-V gbanwere nke ọma na ngọngọ ọsọ 11. ♪ - Run nọmba abụọ na-eru nso.
Strava nọ na, igwe ugbu a dị njikere ịga, ka anyị mee ya. ♪ Ihe mbụ ị hụrụ bụ ka anyịnya igwe siri ike ugbu a. Amaghị m ma ọ bụ ngwa ngwa ngwa ngwa.
Ọ na-adị ngwa ngwa. Mgbanwe mgbanwe ga-echekwa oge. ♪ - Enwetụbeghị m ọgba tum tum na esemokwu mgba ọkụ tupu.
Ya mere ekwesịrị ikwu na ọ bụghị naanị na ị na-efu oge dị ukwuu na-agbada na ọkpọkọ ala gị, mana ịchọta ihe kwesịrị ekwesị bụ ụdị nka. Ọ bụ ezie na enwere m ike iji ụkwụ azụ aka nri. Ahụrụ m ọrịrị dị elu ka ọ na-agbago ka m wee gbanwee gia.
Ọ fọrọ nke nta ka m bụrụ onye efu n'agbanyeghị na m nwere azụ azụ 11. ♪ ♪ Na nso elu. Gettingjọ na-atụ m banyere ọdịda ahụ.
Enwere ahịrị. Jọ na-atụ m ma m gbanwee mgbanaka ahụ. Emela
Anọ m! Oh nwoke, nke ahụ dị mfe karịa ka m chere. ♪ - Ikwu, Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi na igwe kwụ otu ebe Pedro adabaghị m nke ọma ebe nke a dabara m dịka ogwe aka, mana enwere m ọtụtụ ohere ebe a. Geometryi nke oge a emeela anyị obere obere, yabụ achọpụtara m ka m na-agbalị, obere m ga-enweta.
Ọ dị ka ịmegharị ụgbọ elu ma ọ bụ ihe. Nke a bụ ngari. Enwere akara njedebe.
Ọkara oge. Ziri ezi. Nkpuru.
Venga, venga! '' Nri. Anyị ga-akwụsị elekere. Nke ahụ dị mma.
Ya mere, anyị bụ ndị anyị. Nke mbu, Achọrọ m ikwu na nke a bụ ụbọchị magburu onwe ya. Nke abụọ, anyị enweghị ike ịgbanahụ nsonazụ oyi.
Ya mere, ka anyị pụọ. Ugbu a, na igwe kwụ otu ebe nke oge a, emere m obere 5.7 km loop na 12 nkeji na 52 sekọnd.
Ma mgbe ahụ, na igwe kwụ otu ebe Pedro Delgado, emere m ya na ihe karịrị 14 nkeji. Ọfọn, dị ka mmadụ ji obiọma kwuo na Strava, nke a nwere ike ịbụ igwe kachasị nwayọọ nke dịtụrụla. Mana m chọrọ ikwu na echere m na oge mbụ na akụkọ GCN na m ga-ekwupụta ule a ezighi ezi.
Nke ahụ dị mma, GCN emeghị sayensị ọ bụla n'ihi na ọbụghị naanị na m enweghị mkpịsị ụkwụ mkpịsị aka m, ana m ezuru igwe kwụ otu ebe site na Orbea's Museum n'ụtụtụ a, yabụ ọ nwere ike ọ gaghị adị ka PedroDelgado gbagoro ya na Vuelta bụ. Ma ka ọ bụ ihe obi ụtọ na-adọrọ mmasị ụbọchị, n'ihi na ndị a anyịnya igwe dị ka ehihie na abalị. Ee, ọ dị arọ karịa, ọ naghị adabacha kpamkpam ma nwee naanị 12.
Ma eziokwu dị mfe bụ na jiometrị nke retro igwe kwụ otu ebe dị iche na nke igwe kwụ otu ebe n'oge a, yabụ na-adị ya iche. Etu ọ si agbadata, otu o si arịgo, otu esi apụ n’elu oche. Echere m na anyị ga-anwa ịza ajụjụ mbụ anyị.
Kedu ọsọ ọsọ anyịnya igwe nke oge a? Ọfọn, ka anyị kwuo na anyị zọpụtara kilo anọ na 8%, 3 kilomita, nke ahụ nwere ike ịba ezigbo 15 na 20 sekọnd. N'elu nke ahụ, ọ bụ ihe na-eme ikuku, ọbụnadị na-arị elu, nke ahụ nwere ike ịbụ ihe ruru ise na 10 sekọnd. Ma mgbe ahụ agbada, breeki a ka mma karịa, yabụ enwere m ike ịga ọtụtụ, ọsọ ọsọ karị.
Ya mere, nke bụ eziokwu bụ na teknụzụ agafeela ma igwe kwụ otu ebe n'oge a na-agba ọsọ ọsọ. Ugbu a, ọ bụrụ na ị ga-agbaghara m, m ga-achọ itinyekwu oge na ya. Oh, gbaghara m, gbaghara m, enwere m obi ekele
Ee. Agaghị m ahapụ gị, ugbu a ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele ụfọdụ isiokwu GCN ma pịa ebe ahụ, anyị nwere ndepụta ọkpụkpọ sitere na GCN Is Science ebe anyị na-aza ụfọdụ ajụjụ na-ere ọkụ gbasara ịgba ịnyịnya na ịgba ịnyịnya ígwè. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị pịa ebe ahụ, anyị nwere akụkọ anyị gara aga na nke oge a nke Matt Stephen na-ewere igwe kwụgbọ Roche maka ntụgharị.
N'ikpeazụ, dị njikere ịkwụ ụgwọ na GCN, ị nwere ike ịme nke ahụ site na ịpị ebe ahụ. Enwere m ike ikwu na akpọrọ m ị drinkụ ọtụtụ mmanya uhie n'abalị ụnyaahụ ma ọ na-egbochi ikike m ịbelata, naanị nwa oge.
Kedu ihe igwe ochie Schwinn bara uru?
Zụ iheVintage Schwinn Bikes
Iji maa atụ, avinteji SchwinnIkuku nke nkụghachi ga-ere ihe dị ka $ 70. N'aka nke ọzọ, 1920sSchwinnExcelsior na agba mbụ nwere ike ire ahịa maka $ 900.
Kedu ihe a na-akpọ igwe ochie?
Na penny-farthing, dịkwaa maara dị kaa elu wheel, elu wheeler ma ọ bụ nkịtị, bụ nke mbụ igwe na-akpọna 'igwe'.
Vgbọ igwe eji agagharị agagharị dị mma?
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu okwu banyereDevid agụghị ndị gbaraanyịnya igwe mere tupu ufọt ufọt 1980, e nwere ihe aeziOhere inweta na ogo ụlọ ga-adị elu karịa ọtụtụ igwe kwụ otu ebe na-anọghị n'ọtụtụ ọnụahịa dị elu. Ọtụtụ n'ime igwe ochie ndị ochie a bụ ndị ama ama ji aka na-arụ ma na-agbanye ya, na-eji nlezianya elebara anya n'ụzọ zuru ezu.
Afọ nke igwe kwụ otu ebe ọ bara uru?
afọọ bụghị otú ahụ dị mkpa - otu esi eji ya
mkpọka na n'ụzọgaeme ka okpokolo agba gharazie - ịchịisi m, mbaokwuọ dị mma ọfụma na agaghị m azụrụ ya n'aka onye 16 yr nke mere ya - m dị afọ iri na isii wee cheta ụfọdụ ụzọ m ga-esi mee n'okporo ụzọ m.igwe kwụ otu ebe. anyway, ohuruanyịnya igwenwere tube dị iche iche na oghere ụkwụ azụ.Jenụwarị 16 2007 afọ
Kedu ka ị ga - esi mara ma igwe Schwinn ọ bụ vintage?
Chọọ nọmba Oghere dị na ọkpọkọ akwara dị ala (n'elu wiilị dị n'ihu nkeigwe kwụ otu ebe) makaSchwinnsemepụtara n’agbata afọ 1970 na 1979. Ndị nke emepụtara mgbe ụbọchị ndị a gasịrị ga - enwe akara akara akara akara n’elu akwara mgbodo ala (ihe nkedo akuku azụ na-ejide wiilị ahụ).
Kedu uru nke igwe Schwinn bara?
Ahịadịgasị iche iche, dabere na ọnọdụ, afọ, ụkọ, na ọchịchọ nke ihe nlereanya ahụ. Dị ka ihe atụ, a Devid agụghị ndị gbaraSchwinnIkuku nke nkụghachi ga-ere ihe dị ka $ 70. N'aka nke ọzọ, 1920sSchwinnExcelsior na agba mbụ nwere ike ire ahịa maka $ 900.
Kedu mgbe igwe kwụ ọtọ mbụ pụtara?
Vintage anyịnya igwe bụ ndị ama ama n'etiti ndị ọkachamara nka. Dị ka ihe niile ochie, ọbụna ndị a anyịnya igwe na-aesthetically na-adọrọ adọrọ, otutu na o doro anya na ọnụ. Ọtụtụ n'ime ịnyịnya ígwè ndị a sitere na 1960-90s bụ ndị siri ike ijide aka.
Enwere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị maka igwe kwụ otu ebe?
Covid-19 Mmelite: Anyị ka na-emeghe & nkwupụta ụda; ụgbọ mmiri zuru ụwa ọnụ! Ebe ọ bụ na 2012 Steel Vintage Bikes has been the world's largest online shop for ejiri mee vintage & nkwupụta ụda; ịnyịnya ígwè nke oge a, akụkụ na uwe mara mma. Ọ bụrụ n ’ịnọ na Berlin, kpachara anya ileta otu n’ime kọfị anyị.
Kedu ihe ị kwesịrị ịma banyere igwe eji agba ịnyịnya ígwè?
N'ihe banyere uwe eji agba ịnyịnya ígwè, Bikes Vintage Bikes na-achọ ịnye naanị ihe kachasị mma ị nwere ike inweta n'ahịa. Dị ka ndị na-agba ịnyịnya onwe anyị, anyị maara nke ọma na uwe elu dị mma, na-arụ ọrụ ma ọ bụ otu ụzọ na-adịgide adịgide nke ịgba ịnyịnya ígwè dị oke mkpa maka ịnya nkasi obi dịka oke igwe gị.